PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: February 2011
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နအဖ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေမှုအား...
နအဖစစ်အုပ်စုမှ ထိုးစစ်ဆင်နေမှုအပေါ် ဂျပန်လွတ်တော်အမတ...
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်တွေကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးယူပြီ
အင်းစိန် ဗုံးကွဲမှု ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ
FWUBC အဖွဲ့မှကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် လ...
AUN-Japan ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
နမ့်ဆန်မြို့နယ်မှ မြေဧက ရာပေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းခံရ
ဝေါ်လေအနီး နအဖ ကားလမ်း လုံခြုံရေးတပ်တွေ တိုက်ခိုက်ခံရ
ကဒါဖီကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးယူရေး ဘန်ကီမွန်း တိ...
ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနေ...
ဘင်ဂါဇီမှာ လူထု က မြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်
ဘရိုက်တန် ပွဲတော်သို့ လွတ်လပ်မှု သတင်းစကား ဒေါ်အောင်...
နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း နအဖ ၁၀ဦးကျော် ထိခိုက်သေဆုံး
ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦး ပြန်လွှတ်ရန်...
မိမိဆန္ဒ အလျောက် UWSA သို့ဝင်လျင် ဘတ်ငွေသောင်းချီေ...
လူငယ် ၁ဝဝ ခန့် KIO ထံ ဝင်ရောက်လာဟု အရာရှိ ပြော
Gripen အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွ...
ဂျပန် ဖျော်ဖြေပွဲမှ အနုပညာကြေးများကို မရမ်းချောင်း...
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိဘဲ လုံခြုံဘေးကင်းမှု မရနိုင်
နယ်စပ် အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိုင်းတင်းကျပ်
ဆန္ဒပြသူများ ကို ထရီ ပိုလီ တွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက...
စီအဲန်အေ နှင့် နအဖ စစ်တပ်အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ န...
ဒေါ်စုကို ကနေဒါတက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ချီး...
အမေရိကန် အစိုးရ အဆက်ဆက် ပြုတ်ကျစေချင်တဲ့ အာဏာရှင် ...
အလုပ်သမား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အမှတ်စဉ်(၁၂)
တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၃) နှစ်မြောက် ချင်...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ဆရာ ဥ...
နာဂိုယာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် မွန်အ...
ကော့ကရိတ်အနီး တရုတ်ဖြူတောင် ဝါးစခန်းအား ဒီကေဘီအေ ဝ...
မေ့မရသေါ မမေ့သင့်သော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တယောက်အြေ...
နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ဦး DKBA ရှေ့ထွက်မိုင်းကြောင့် ထိခ...
အဖမ်းဆီးခံ ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦး ...
ပထမဆုံး လီဆူရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မြစ်ကြီးနားတွ...
ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တွင် လျှပ်တပျက် ၀င်ေ...
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကို ဂျပန်နိုင်ငံ-တို...
တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်...
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဒုတိယပိုင်း ယဉ်ကျေး...
တိုကျိုတွင် ကျင်ပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထော...
နအဖ ၈ယောက် ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့ ဘိတ်ထားဝယ်ဘက်က တိုက်ပွဲ
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ပြော၊ စစ...
တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၀၈၃ ဟု KNU ပြော
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ တယ်လီဖ...
မြဝတီ ဘားအံ ကားလမ်းပေါ်က နေရာ ၃ နေရာမှာ ဒီကေဘီအေ ဝင...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးဆောင်သော နိုင်ငံ့ဥသျှောင်အဖွဲ...
အစိုးရသစ်မှာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ အမျိုးသမီး မပါ
ဟတ်ကြီး ရေကာတာစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရန် KNU ပြော
ကရင်ခေါင်းဆောင် ဖဒိုမန်းရှာအား ပါဒူးတက္ကသိုလ်က ဆုချ...
လွတ်မြောက်ရေးဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခံရ
ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် ညှိ...
ကျိုက်ဒုံနားက ဘုရားငုတ်တိုမှာ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲ
နအဖစစ်ကူတပ် KIA မိုင်းထိ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
စစ်ဆင်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက တိုက်ခိုက်ဖို့ ကရင် နယ်ခြား...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများအပေါ် ဖိနှိပ်မှု လျှော့သွားဦး...
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူရွှယ်တော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ ...
(၁၈)ကြိမ်မြောက် သျှမ်းပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ြ...
ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲကြောင့် နအဖ တပ် အထိနာ
(၆၄)နှစ်မြောက် သျှမ်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား တိုကျိ...
ဒီမိုကရေစီရေး မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီး...
သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား ပြန်လည်ခေါ်ဝေါ်
တိုင်းရင်းသားကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားမပြုဟု ဝေဖန်
စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ကေအင်ယူ တိုက်ပွဲ ထပ်မံ ဖြစ်ပွား
နအဖ အတုအယောင် ပါလီမန် လွှတ်တော်အား ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်သ...
အမေရိကန်မူဝါဒ အပြောင်းအလဲ မြန်မာအစိုးရသစ်အပေါ် မူတည်
ကချင် တော်လှန်ရေး နှစ်၅၀ ပြည့် အခမ်းအနား ကြီးကျယ်စ...
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဝ်ါလေ မော်သုနေရာမှာ ပြောက်ကျား တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်
ရှေ့တန်းတနေရာမှ ကျင်းပသော (၆၂)နှစ်မြောက် ကရင့်တော်...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ဖို့ အစိုးရသစ်ကို ဂျပ...
ဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက်နက် ပစ်ခတ်မှု နအဖ တပ်လေ့ကျင့်
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နအဖ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေမှုအား ရှုတ်ချကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၈)ရက်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ နအဖ စစ်အုပ်စုမှ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသော စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေး တောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုနှင့် လစဉ်(၃၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်နေသော ဒီပဲယင်း ဆုတောင်းသည့် အခမ်းအနားမှ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားကို ဂျပန်ရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲ တို့မှ ပူးပေါင်း၍ တိုကျိုရှိ နအဖ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှာ ယနေ့ ညနေမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသော စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် တောင်းဆိုသည့် လှုပ်ရှားမှုကို ကရင်အမျိုးသားများ အားလုံး၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှု အဖြစ် နိုင်ငံအသီးသီးတွင် တပြိုင်တည်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းကို KNU-Japan ကိုယ်စားလှယ် စောမျိုးခိုင်ရှင်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြား သွားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး NLD-LA(JB) ဒု ဥက္ကဌ ဦးသောင်းလှိုင် မှ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိူင်ငံ၏ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းများကို ကျော်လွှားနိူင်ရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အားလုံးပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နအဖ စစ်အုပ်စုအား တိုက်တွန်း ပြောဆိုသွားပါသည်။
တိုင်းရင်းသား ဒေသ ထိုးစစ်ဆင် လူမျိုးတုံး မျိုးဖြုတ်နေမှုများ ရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် အားလုံးပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နအဖ စစ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသည့် စာတစောင်ကို ဂျပန်ရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားများတို့မှ နအဖ စစ်အခွန်ရုံး သံအမတ်ကြီးကနေတဆင့် စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံသို့ ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်သည့်စာကို ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အင်အား ၁၀၀ ခန့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ Lian Kham Sum/Moe Min Thu
Posted by PNSjapan at 9:02 PM0comments
နအဖစစ်အုပ်စုမှ ထိုးစစ်ဆင်နေမှုအပေါ် ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂအား သွားရောက် ရှင်းလင်းတင်ပြ။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ဂျပန်)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်)နှင့် မြန်မာ့ရေးရာရုံး စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဂျပန်လွတ်တော်သို့ သွားရောက်၍ ကရင်ပြည်နယ် ဒေသအတွင်း နအဖ စစ်အုပ်စုမှ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် နေမှုအား ရပ်တန့် ပေးရန်အတွက် အမတ်များ သမဂ္ဂအား သွားရောက် ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာ့အရေးအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသော ဂျပန်အမတ်များ သမဂ္ဂ(GIREN)၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ အထက်လွတ်တော် အမတ် (ဂျပန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) Mr.Azuma KONNO မှ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နအဖ၏ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက် မှုတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ဒေသခံ ပြည်သူများ အိုးအိမ်ခြံမြေတို့ကို စွန့်ခွါပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် တောတောင်တွေမှာရော ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပါ ထွက်ပြေးနေခဲ့ကြရကြောင်း စစ်ဆင်ရေးများတွင် ဒေသခံများကို ရိက္ခာသယ်ရန် ပေါ်တာစွဲခြင်း၊ လူသားမိုင်းရှင်းကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း စသည့် လူမျိုးတုံး မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုများ ရပ်တန့်ပေးရန် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရနှင့်တကွ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တားဆီးပေးရန် သွားရောက် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
အမတ်သမဂ္ဂမှ တိုင်းရင်းသား ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက် စေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဂျပန်လွတ်တော် အမတ်များတို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြားနားမှုကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ များနှင့်အတူ ထိရောက်သည့် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုမှုများ ကူညီ ဆောင်ရွက်မှုများ စီစဉ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ Moe Min Thu
Posted by PNSjapan at 7:23 PM0comments
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြ ပြည်သူများကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များအား ဒဏ်ခတ် အရေးယူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး၌ ကန့်ကွက်သူမရှိ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ (UN Photo/Evan Schneider)
လူထု ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေတဲ့ လစ်ဗျား အာဏာပိုင်တွေကို ဒဏ်ခတ် အရေးယူဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် လိုက်ပါပြီ။
မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ အခုလို အရေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် လိုက်တဲ့အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
လစ်ဗျား အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် နှုန်းစံ အားလုံးကို ချိုးဖောက်နေတယ်၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ချိုးဖောက် နေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှား နေပါတယ်လို့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။
အခု ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လစ်ဗျားအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ငွေကြေးပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ် လိုက်ပြီး လစ်ဗျားနိုင်ငံနဲ့ လက်နက် ရောင်းဝယ်မှုတွေကို ပိတ်ပင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေ အပေါ် အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စကို ICC ခေါ် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံးက စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့လည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 2:24 AM0comments
27 ဖေဖော်ဝါရီ 2011,
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် ကမ်းနားလမ်းမှာ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပွားပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မသိင်္ဂီထိုက်က စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အင်းစိန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတဲ့ အောင်ဇေယျတံတား အနီးမှာ ဒီကနေ့ ည ၇ နာရီကျော်လောက်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီဗုံးကွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနီးအနား ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ အခင်း ဖြစ်ပွားရာကို သွားကြည့်သူ တဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြည့်ရာမှာ သူက အခုလိုပြောပါတယ်။
“၇ နာရီ မထိုးခင်လောက်တုန်းကပဲ ဗုံးပေါက်သွားလို့၊ တံတားနားလေးကလို့ ပြောတယ်။ အသံအကျယ်ကြီး ကြားတယ်။ ခွဲတဲ့လူတော့ အောက်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘေးက ၂ ယောက် ထိသွားတယ်။ ခွဲတဲ့သူနဲ့ဆိုရင် ၃ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့။ အသံကတော့ အကျယ်ကြီး ကြားရတယ်။
Posted by PNSjapan at 12:44 AM0comments
FWUBC အဖွဲ့မှကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အမှတ်စဉ်(၁၃)။
ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အမှတ်စဉ်(၁၃)ကို တိုကျို Takadanobaba အရပ်ရှိTotsuka Chiki Center,5F ယနေ့ နေ့လည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်-(ဂျပန်ပြည်)မှ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အရိုး အဆစ်ဒဏ်ရာရခြင်း ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာများ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများတို့မှ လုပ်ငန်းခွင် များတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများတို့ကို ဒေါက်တာ ရှိဂေးရု တိုမိတ နှင့် ဒေါက်တာ ယာမမူရ ဂျွန်ပေးအိ တို့မှ ပါဝါပွိုင့် စလိုက်ရှိုးဖြစ် ရှင်းလင်း ဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၂)ရက်။
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း AUN-Japan ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ ညနေ ၆း၃၀ မှ ၈း၀၀နာရီ အထိ Takadanobaba အရပ်ရှိ AUN ရုံးခန်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများတို့မှ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက် သွားကြမည့် လုပ်ငန်း ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် တိုင်းရင်းသား စုပေါင်းရုံးခန်း ရပ်တည် နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ် ထည့်ဝင်ငွေ များကိုလည်း အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ထည့်ဝင် သွားကြရန် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း AUN-Japan ၏ မူဝါဒနှင့် စည်းပုံ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းသစ်ကို လာမည့် လပတ်စည်းဝေးများတွင် ဆွေးနွေးသွားကြရန် ဆုံဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ။ Moe Min Thu
Sunday, 27 February 2011,
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင် နမ့်ဆန်မြို့အခြေစိုက် နဂါးပျံ အချိုခြောက်စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူ ဦးလှရွှေအဖွဲ့၊ နမ့်ဆန်မြို့ မြေတိုင်း စာရင်းဦးစီးဌာန နှင့် မယက ဥက္ကဌအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၁၊ ဇန်န၀ါရီလ ကုန်ပိုင်း လောက်တွင် နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ မန်လွယ်အုပ်စု၊ အထက် မန်လွယ်ကျေးရွာမှ မြေဧကပေါင်း (၅၀၀)ခန့် သိမ်းဆည်း သွားခဲ့ ပါသည်။
ကြိုတင် အကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အမိန့်အရ လက်ဖက်စိုက်ဖို့ မြေဧက(၅၀၀) လိုတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ရွာဥက္ကဌကို အတင်း နေရာလိုက်ပြခိုင်းပါတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒီလိုလာသိမ်းမယ်ဆိုတာ ရွာဥက္ကဌကော ကျတော်တို့အားလုံးကော ဘာမှကြိုတင် မသိလိုက်ရပါဘူး တိုင်းမှူးရဲ့ အမိန့်အရ လက်ဖက်စိုက်ဖို့ မြေဧက(၅၀၀)လိုအပ်နေတယ် ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြပေးပါဆိုပြီး အဲဒီ နဂါးပျံ အချိုအခြောက် စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ မြေတိုင်း စာရင်းဦးစီးဌာနက လူတချို့နဲ့ မယက ဥက္ကဌတို့က လာသိမ်းသွားတယ်" လို့သူကပြော ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 5:07 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်(ဂျပန်)NDB-Japan ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းစည်းဝေး
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်(ဂျပန်)NDB-Japan၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို Takadanobaba အရပ်ရှိ Recycle Center 4F,မှာ ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၇)ရက် နံနက် ၉း၃၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး လာမည့် မတ်လ(၁၃)ရက် မြန်မာနိုင်ငံ လူအခွင့်အရေးနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအတွက် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှုမျာ၊ ဖို့ဝိန်းညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ NDB-Japan ၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသည့် ရပ်တည်ချက် သဘောထားကို ရှင်းတင်ပြသွားရန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားကြမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတို့ ဆွေးနွေး ဆုံဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သတင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။ Lian Kham Sum
Posted by PNSjapan at 1:23 PM0comments
ဖေဖော်ရီလ ၂၃ ရက်နေ့ ကစလို့ မြဝတီနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ကော့ကရိတ် ကုက္ကို နေရာတွေမှာ ဒီကေဘီအေ ဘက်က ဝင်ရောက် စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေအရ စစ်တပ်လုံးခြုံရေးတွေ ထူထပ်စွာ ချထားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီရက်ထဲမှာပဲ နအဖ ဘက်က ထောက်ပို့ ကားတန်းတွေ မြဝတီကို ရောက်ရှိလာကာ ဖလူးနဲ့ ဝေါ်လေဘက်ကို ဆက်သွားမယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ရရှိခဲ့ပြီး။ ဒီကနေ့မှာ ဝေါ်လေဘက်ကို တက်မယ့် နအဖ စစ်ကားတန်းကို လုံခြုံရေးယူ ထားတဲ့ တပ်တွေကို ဒီကေဘီ နဲ့ ကေအန်ယူ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက ကနဲ့လေးနဲ့ ဘလဲ့ဒို့ ဘက်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
နအဖ တပ်မ ၂၂ လက်အောက်ခံ တပ်တွေကို ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ဝေါ်လေ အနီးက ကနဲလေး နေရာမှာ ဒီကေဘီအေ နဲ့ ကေအန်ယူ ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့တွေက တိုက်ခိုက် လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထိတွေမှုမှာ နအဖ ဘက်က ၄ ယောက် သေပြီး ၁၀ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ် လို့ သိရပြီး၊ ဘလဲ့ဒို့ ဘက်မှာတော့ နအဖ ဘက်က ၂ ယောက်သေ၊ ၄ ယောက်ဒဏ်ရာရ တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ကဒါဖီကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးယူရေး ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွန်း
25 ဖေဖော်ဝါရီ 2011,
လစ်ဗျားပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာကဒါဖီ (Moammar Gadhafi) ကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင် ရှုတ်ချမှုတွေ တိုးလာနေချိန်မှာပဲ သောကြာနေ့က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က လုံခြုံရေး ကောင်စီကနေ အရေးယူမှုတွေ သေသေချာချာ လုပ်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်က တောင်းဆိုထားတဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်တာတွေနဲ့အတူ လက်နက် အရောင်းအ၀ယ် ပိတ်ပင်ဖို့နဲ့ ကဒါဖီမိသားစုရဲ့ ခရီးသွားလာမှု ပိတ်ဆို့ဖို့တွေကို ဆုံးဖြတ်ချက် အမြန်ဆုံးချမှတ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာကဒါဖီနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သွေးသောက် တဦးဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်က လစ်ဗျားသံအမတ်ကြီး Abd al-rahman Shalgham က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ လစ်ဗျားကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် အဆိုပြုထားတဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အမြန်ဆုံး ချမှတ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်း လစ်ဗျား ပြည်သူတွေ ကိုယ်စား တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာကဒါဖီပြုတ်ကျရေး ဘန်ဂါဇီမြို့တွင်း ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြသည့်လူထု (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၁)
တချိန်တည်းမှာပဲ ဂျနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လစ်ဗျားသံတမန်တွေကတော့ သူတို့အားလုံး အလုပ်ကနုတ်ထွက်ပြီး လစ်ဗျားပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လစ်ဗျားကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းးပနေချိန်မှာ အခုလို ကြေညာခဲ့တာပါ။
Posted by PNSjapan at 11:34 AM0comments
February 25, 2011,
အရှေ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရတွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံက နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ ပြည်သူတွေက သိမြင်လာတဲ့ အကျိုးရလဒ်က တော့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေးတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ အခုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ သူတို့ကို အုပ်ချုပ် နေတဲ့ အစိုးရတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ စစ်ရေးအရ ၀င် ရောက် စွက်တာ လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အာရပ် တွေသိလာတာ ပါပဲ။ အခုမှ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ။ မနှစ်က ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ဒါမှမဟုတ် ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒီနှစ် ထဲမှာမှ တူနီးရှားနဲ့အီဂျစ်မှာ တော်လှန်ရေးတွေ ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ။ အခုဆို ဂျော်ဒန်၊ ယီမင်၊ ဘာရိန်း၊ လစ်ဗျားနဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက်နေကြတဲ့ ဆန္ဒပြ သမားတွေကို ဒီတော်လှန်ရေးတွေရဲ့အောင်မြင် မှုက ထူးထူးခြားခြား စေ့ဆော်ပေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေ
ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ကြားခြင်း
FWUBC WORK SHOP NO(13)-ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ- တို့ ဆုခ ချိခိ စင်တာTotsuka Chiki Center(တာကာဒါနိုဘာဘာ)-5F
အချိန်-ညနေ(၂) နာရီမှ (၅) နာရီ
◆ဒေါက်တာ ရှိဂေးရု တိုမိတ
◆ဒေါက်တာ ယာမမူရ ဂျွန်ပေးအိ
(မီနာတို မာချိ စင်တာ၊ ယိုကိုဟားမား၊ ဂျပန်။)
အောက်ပါအစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါမည်။ (စလိုက်ရှိုးပြခြင်းအပါအဝင်)
(၁)ခါးနာခြင်း အရိုးအဆစ်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်
※အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များအပြင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မိမိသိလိုသည်များကို
☛ကျန်းမာမှ- မိမိအရေး မိသားစုအရေး နိုင်ငံ့အရေးကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်
ဟု မိမိတို့FWUBC အဖွဲ့မှ ယုံကြည်သည့်အတွက် တက်ရောက်လေ့ လာ
ဆွေးနွေးကြပါရန် မေတ္တာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ အဓိက မြို့တွေမှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေက ထိန်းချုပ် လိုက်နိုင်ပြီလို့ ကြေညာ ခဲ့ကြပြီး မြို့တော်ကို လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားကြပါတယ်။ လစ်ဗျား ဒုတိယမြို့တော် ဘင်ဂါဇီမှာ လူထု က မြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်လိုက်ကြပြီး၊ လေဆိပ်တွေကို ထိမ်းချုပ် လိုက်ပါပြီ။
Copy from_ komoethee.blogspot
ဘရိုက်တန် ပွဲတော်သို့ လွတ်လပ်မှု သတင်းစကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးပို့
ယခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ၃ ပတ်ကြာကျင်းပမယ့် ဘရိုက်တန် အနုပညာပွဲတော် အတွက် ဧည့် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘရိုက်တန်ပွဲတော်ကို နုတ်ခွန်းဆက် ဗီဒီယို အခွေ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ပေးပို့ထားတဲ့ ရုပ်သံခွေမှာ ဗြိတိသျှသားတွေရဲ့ အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့တဲ့ “ကျွန်ုပ်တို့ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် သင်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အသုံးချပေးပါ” (Use your liberty to protect ours) ဟူသော စကားကို ပွဲတော်၏ အနှစ်သာရအဖြစ် မှတ်ယူ ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 1:16 AM0comments
တိုက်ပွဲဝင် DKBA နှင့် KNUပူးပေါင်းအဖွဲ့၏ လက်ဖြောင့် တပ်သားများ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ် ကနဲလေးဂွင်ရှိ ဖို့ခဲတဒို့နှင့် ခီးကုဒေါ့်ခီးဂွင်ဖောမု ဘောထာ့နေရာတွင် ကရင်တပ်ဖွဲ့နှင့် နအဖ တပ်များအကြား နှစ်ရက်တာအတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နအဖ ဘက်မှ ၁၀ဦးကျော် ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
DKBA-KNLA ပူးပေါင်းတပ်နှင့် နအဖ စကခ(၅) လက်အောက်ခံ ခမရ(၅၆၃)၊ စကခ(၈) လက်အောက်ခံ ခမရ(၄၀၄)တပ်ရင်း တို့ ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲတွင် ကရင်တပ်ဖွဲ့ဘက်မှ ထိခိုက်မှုများ မရှိသော်လည်း နအဖဘက်မှ ၇ဦး ကျဆုံးပြီး ၉ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု DKBA တပ်မှူးတဦးက ကေအိုင်စီကို ယခုလို အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
“မနေ့ညနေ ၆နာရီ မိနစ်၂၀ ဖောမုဘောထာ့မှာ ကျနော်တို့နဲ့ ခမရ(၅၆၃)တို့ ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲက ၁၀မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်။ အဲဒီ တိုက်ပွဲမှာ နအဖဘက်က ၄ယောက်သေတယ်။ ၆ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီ ၅မိနစ်မှာ ခမရ(၄၀၄)နဲ့ တခါ ထပ်ဖြစ်တယ်။ ၃ယောက်သေ၊ ၃ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ နောက် ဒီနေ့လည် ၁၁နာရီ ၅၅မိနစ်မှာ နအဖတပ်သား တယောက် မိုင်းနင်းမိတာရှိပေမဲ့ ဘယ်တပ်ရင်းလဲဆိုတာတော့ စုံစမ်းဆဲပဲ။”ဟု သူက ပြောသည်။
ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦး ပြန်လွှတ်ရန် တိုကျိုရှိ အိန္ဒိယ သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ
၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄)ရက်။
ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်(၃၄)ဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အိန္ဒိယအစိုးရမှ အမြန်ဆုံး လွတ်ပေးရန် တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်)နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ကရင် လူမျိုးများတို့မှ ဦးစီး၍ တိုကျို အိန္ဒိယ သံရုံးရှေ့ တွင် ယနေ့ ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယ အစိုးရအနေဖြစ် တော်လှန်ရေးသမား ၃၄ ဦး တို့ရဲ့ ဘဝလုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာပြည် ကို ပြန်မပို့ဖို့နဲ့ အပြီးအပိုင် အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်နှင့် တရားဝင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးပြီး လုံခြုံတဲ့ နိုင်ငံ တခုခုမှာ ခိုလုံခွင့်ပေးရေး စသည်တို့အတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြရတာဖြစ်ပြီး တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသည့် စာကို တိုကျိုမြို့ရှိ အိန္ဒိယ သံရုံးမှတဆင့် အိန္ဒိယ အစိုးရထံတို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်နှင့် ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦးကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ စစ်တပ်က အိန္ဒိယ ရေပိုင်နက် အန်ဒမန်-နီကိုးဘားကျွန်းစု လန်းဖောကျွန်း၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၃ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီးသည်။ စွဲချက် တင်ထားသည့် အမှုများ အားလုံးမှာလည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ နေ့ မှာ ကတည်းက ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အခုထိ ကိုးလ်ကတ္တား အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခံနေကြရဆဲဖြစ်သည်။
မိမိဆန္ဒ အလျောက် UWSA သို့ဝင်လျင် ဘတ်ငွေသောင်းချီ ပေးမည်ဟုဆို
ဝ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် စစ်အင်အား ပြနေပုံ (ဓာတ်ပုံ- S.H.A.N.)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23 ရက် 2011 ခုနှစ်။
သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း .အသက် ၁၇- ၁၈ နှစ်အထက် ဒေသခံ အမျိုးသားများ မိမိဆန္ဒအလျောက် ဝ စစ်တပ်သို့ဝင်ရောက် စစ်ရေး လေ့ကျင့်၊ စစ်မှုထမ်းပါက ၎င်း၏မိသားစုအား ဘတ်ငွေ သောင်းချီ ပေးမည်ဟု ကျိုင်းတုံမြို့နယ် အချို့အုပ်စု များ၌ တိတ်တဆိတ် စည်းရုံး နေကြောင်း ကျိုင်းတုံ သတင်းရပ်ကွက်က ဆို၏။
“စည်းရုံးနေတာ ဒေသခံသျှမ်းတွေဘဲ။ ဝ တပ်ထဲ ၆ လ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖို့ သဘောတူရင် သူ့မိသားစုကို ဘတ် ငွေ ၅ သောင်း ပေးမယ်တဲ့။ ကျပ်ငွေ ဆိုရင် ၁၅ သိန်းလောက် ရှိမှာပေါ့။ စစ်သင်တန်းပြီးရင် အိမ်ပြန်ပို့မယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချိန် ပြန်ခေါ်ရင် ချက်ချင်းသွား ရမယ်ဆိုဘဲ။ စစ်သင်တန်း ပြီးလို့ အိမ်မပြန်ဘူး တပ်ထဲမှာဘဲ နေဖို့ သဘောတူရင် မိသားစုကို ဘတ် ၇ သောင်း ၅ ထောင် ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ကျိုင်းတုံမြို့ မိုင်းယန်း အုပ်စုနေ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ထိုသို့ မထင်မရှား လှုံ့ဆော်မှုမှာ အဓမ္မနည်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မိမိဆန္ဒ အလျောက်ဟုသာ ပြောဆိုကြောင်း ၎င်း ဒေ သခံက ဆက်ပြောပြသည်။
“ ဗမာစစ်တပ်လို သျှမ်းစစ်တပ်လို ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့တွေလို အဓမ္မကောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး ဝင်ချင်မှဝင်ပါ လို့ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ အပိုင်းမှာ ဝ တပ်ထဲ ဝင်သွားတဲ့ လူငယ် ၇ ယောက် ၈ ယောက် ရှိပြီ။” ဟု တိုက်နယ် အကြီး အကဲတဦးက ပြောသည်။
နအဖ စစ်အုပ်စု၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး ငြင်းဆန်ပြီးနောက်ပိုင်း ဝ နယ်ခြား တလျှောက် နအဖ စစ်အင်အား တပ်ချထားသကဲ့သို့ ဝ ဘက်ကလည်း မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံကာကွယ်ရန် တပ်အင်အား ပိုမို စုဆောင်း လာခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by PNSjapan at 1:54 AM0comments
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
စစ်အစိုးရက တပ်သားသစ် စုဆောင်းနေသဖြင့် ဒေသခံလူငယ် ၁ဝဝ ခန့်သည် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO ထံ လွန်ခဲ့သည့် ၇ ရက်အတွင်း ထွက်ပြေး ဝင်ရောက်လာကြောင်း KIO အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မပခ) က လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း များကို တပ်သားသစ် စုဆောင်းရန် ညွှန်ကြားခဲ့သဖြင့် KIO လက်အောက်ခံ တပ် ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA တပ်ရင်း ၁၁ သို့ ဝင်ရောက် လာကြောင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“မပခက စစ်သားသစ် စုဆောင်းလာမယ်ဆိုတာတွေ၊ အရင် ပြန်တမ်းမှာလည်း စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတာ ထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့ အချိန်မှာပဲ စစ်သားပြန်စုဆောင်းလာတော့ မကြောက်တဲ့ လူတွေက KIO စစ်သား လုပ်မှာပေါ့။ ဒီမှာလည်း ကျောင်းရှိတယ်လေ။ ကျောင်းပြန်တက်လို့ ရတယ်လေ” ဟု KIO အရာရှိက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးကို ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ် ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ မစုဆောင်းနိုင်သော တပ်ရင်းများက တလလျှင် ကျပ် ၃ သိန်း ပေးရမည်ဖြစ်ကာ ထိုငွေများကို စုဆောင်းနိုင်သော တပ်များသို့ ဆုလာဘ်အဖြစ် ပေးမည်ဟု စစ်တပ်အတွင်း ညွှန်ကြားချက်များ ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
Gripen အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ထိုင်း ပထမဆုံး အသုံးပြု
ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် Gripen အမျိုးအစား ဂျက် တိုက်လေယာဉ် ၁၂ စီးကို ထိုင်းတော်ဝင် လေတပ်အတွက် ဝယ်ယူခဲ့ရာ ပထမအသုတ် အဖြစ် ၆ စီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူရတ်ထနီ ရှိ အမှတ် ၇ လေတပ် စခန်းသို့ ယမန်နေ့ ညဦးပိုင်းက ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၎င်း ဂျက်တိုက် လေယာဉ်များကို ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်မှ F-5 A/B အမျိုးအစား ဂျက် တိုက်လေယာဉ်များကို အစားထိုးရန် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Gripen တိုက်လေယာဉ် ၁၂ စီး၏ တန်ဖိုးမှာ ထိုင်းဘတ် ၄၀ ဘီလီယံနီးပါးခန့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Gripen ဂျက်လေယာဉ်များကို ဆွီဒင် လေယာဉ်မှူးများမှ မောင်းနှင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လေယာဉ်များကို ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်မှ တာဝန်ရှိသူများထံ တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးရဦးမည် ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့က ရောက်ရှိသည့် Gripen တိုက်လေယာဉ် ၆ စီးသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ထွက်ခွာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဟန်ဂေရီ၊ ဂရိ၊ အီဂျစ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် ရပ်နားခဲ့သေးသည်။ Gripen ဂျက်လေယာဉ် မောင်းနှင်နည်းကို ထိုင်းလေယာဉ်မှူး နှစ်ဦးက ဆွီဒင်နိုင်ငံ၌ လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ယခုပထမ အသုတ် မှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးအနက် တဦးဖြစ်သူ Capt Putthipong Phonchiwin က “Gripen တွေက ကျနော့် အတွက်တော့ နံပါတ်တစ် တိုက်လေယာဉ်တွေပါပဲ။ အရင်က ကျနော် မောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ F-5 တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် မယ်ဆိုရင် ဆီဒင်ကား နဲ့ ပြိုင်ကားတွေ မောင်းရတဲ့ အတိုင်းပဲ”ဟု ဆိုသည်။
ဂျပန် ဖျော်ဖြေပွဲမှ အနုပညာကြေးများကို မရမ်းချောင်း သို့ လှူ
ယခု လ ခြောက်ရက်နေ့က ဂျပန် နိုင်ငံ တိုကျို မြို့ တွင် သွားရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ
ဖြစ်သည့် ဗေလုဝ ၊ ကျော်ထူး ၊ ခင်လှိုင် နှင့် ဒိန်းဒေါင် တို့ မှ ၎င်း တို့ ၏ အနုပညာ ကြေးများ ကို ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူး မြို့ နယ် မရမ်း ချောင်း ကျေး ရွာ အုပ်စု ရှိ မသန်းစွမ်း အနာကြီး ရောဂါ သည်များ အတွက် ငွေကျပ်သိန်း လေးဆယ် ကို သွား ရောက် လှုဒါန်း သည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဂျပန် နိုင်ငံ တွင် မြန်မာ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အငြိမ့် သဘင် ပွဲ ဖြစ်မြောက် အောင် စီစဉ် ခဲ့သည့် ကိုမျိုးခိုင် ကလည်း မရမ်းချောင်း ပရဟိတ ဂေဟာ နှင့် ယခင် နှစ်က ဂီရိ လေမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံရသည့် ကျောက်ဖြူမြို့များသို့ ထိုရံပုံငွေ ပွဲမှ ရရှိသည့် ငွေများကို ထည့်မံ ထည့်ဝင် လှုဒါန်း ခဲ့သေးသည်။
အင်္ဂါ, 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2011,
ဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်မှာ လုံခြုံဘေးကင်းမှု မရနိုင်သလို လွတ်လပ်မှု ဆိုတာလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံ ကာလ်တန် (Carleton) တက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်တဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပ်နှင်းတဲ့ အခမ်းအနားအတွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အဲဒီ အခမ်းအနားကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီ မိန့်ခွန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံ ကာလ်တန် တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပတဲ့ အဲဒီ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ပွဲကို တက္ကသိုလ် အဓိပတိ အပါအ၀င် ကနေဒါ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ကနေဒါ အစိုးရပိုင်းက အရာရှိတွေပါ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆုချီးမြှင့်ခံရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဒီပွဲကို ရောက်မလာနိုင်ပေမဲ့ ဗွီဒီယိုကတဆင့် တတ်ရောက်လာသူတွေကို မိန့်ခွန်းစကား ပြောပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုဟာ တပြိုင်နက်တည်း ရှိဖို့လိုသလို အဲဒီအတွက်ဆိုရင် ဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာ မဖြစ်မနေ အရေးပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 3:52 PM0comments
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ် ခရိုင်တွင် ခိုလှုံနေကြသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများကို ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် တင်းကျပ်စွာ ကိုင်တွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း သတင်းတွင် ပါရှိသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသော အတိုက်အခံများနှင့် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်များ မြန်မာ စစ်တပ်ကို သွားရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြုခြင်းများကို ထိုင်းအစိုးရက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည်ဟု တာ့ခ် ခရိုင် တာဝန်ခံက ပြောကြောင်း ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ယနေ့ မနက်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ ပြောဆိုလာခြင်းမှာ မြန်မာ စစ်အစိုးနှင့် နယ်စပ်အခြေစိုက် ထိုင်း စီးပွားရေးသမားများ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဟု စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတို့က ယူဆကြပြီး ထိုင်းအစိုးရက ယင်းသို့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှုမျိုး ပြုလာပါက ထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု FDB မှ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ပြောသည်။
ဆန္ဒပြသူများ ကို ထရီ ပိုလီ တွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုအပြီး လစ်ဗျား ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ ပြည်သူဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်(Air Strike Video)
ပြည်သူ ကို ပြစ်သတ် ရန် အမိန့် ကို ငြင်းဆန် ပြီး ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံ ခဲ့တဲ့ လစ်ဗျား လေသူရဲ နှစ်ဦး
ကိုင်ရို၊ ၊ တနင်္လာနေ့ မနက် အစော ပိုင်းက စပြီး လစ်ဗျား နိုင်ငံ ထရီ ပိုလီ မြို့ တော်မှာ ဆန္ဒပြနေ သူတွေကို လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင်း မွမ်မာ ကဒါဖီ ရဲ့ အမိန့် နဲ့ လေကြောင်း ကနေ တိုက် ခိုက်နေတယ် လို့သတင်း ရရှိပါတယ်။(Updates)
ဆန္ဒပြသူ တွေ ကို နှိမ် နှင်း ရာ မှာ အာဖရိက နိုင်ငံ တွေက ကြေးစား စစ်သား တွေ ကိုလည်း ငှားရမ်း အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အတွက် ထရီပိုလီ မှာ ဆန္ဒပြသူ ၆၀ ကျော်ထပ်မံ သေဆုံး ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေ ကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် တာတွေ ကြောင့် လစ်ဗျား နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ သံအမတ် ကြီး အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက လစ်ဗျား သံအမတ် ကိုးဦး က လက်ရှိ ရာထူးတွေ ကနေ နှုတ်ထွက် ခဲ့ပြီး ၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ လစ်ဗျား သံအမတ်ကြီး အယ် အာဆာ မီ က တော့ ကဒါဖီ နှုတ် ထွက် ဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြ လစ်ဗျား ပြည်သူတွေ ဟာ မနေ့ က မြို့ တော် ထရီပိုလီ က အစိုး ရ ရုံးတွေ ကို မီး ရှို့ ခဲ့တာ ကြောင့်
မြို့ တော် ထရီ ပိုလီ မှာ အုပ် ချုပ် ရေး ယန္တရား တွေ ရပ် ဆိုင်း နေတယ် လို့အယ်(ဂျာ) ဇီးယား သတင်း
ထုတ်လွှင့် မှု မှာ ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြ သူတွေ ကို လေကြောင်း ကနေ နှိမ်နှင်း ဖို့ အမိန့် ပေး ခြင်း ကို ငြင်းဆန် ခဲ့တဲ့ လစ်ဗျား လေယာဉ်မှုး နှစ် ဦး ကတော့ မော်လ် တာ နိုင်ငံ မှာ၎င်း တို့ လေယာဉ်တွေ နဲ့ခိုလှုံ ခွင့် တောင်း ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လစ်ဗျား သံအမတ်ကြီး ကလည်း ကဒါဖီ အစိုးရ ကို အကြီး အကျယ်ရှုတ်ချပြီး ရာထူးကနေ နှုတ် ထွက် ခဲ့ပါတယ်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ မြို့ တော် ထရီ ပို လီ မှာ တော့ ဆန္ဒပြ သူတွေ ဟာ မြို့ လည် က မြစိမ်းရောင် ပြင်မှာ စုရုံးပြီး ကဒါဖီ နှုတ် ထွက် ပေးဖို့ တောင်းဆို ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ က လူမျိုး တုံး သတ်ဖြတ် မှု တွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံ တကာ အစိုးရတွေ က တော့ အပြင်း အထန် ဝေဖန် ရှုံချထားပါတယ်။ ထရီပိုလီ မြို့ ရဲ့အရှေ့ ခြမ်း ကို ဆန္ဒပြ သူတွေ က ထိန်းချုပ် ထား နိုင်ပြီး မြို့ တော်တွင်း ကို ချီတက်ရာမှာ ကဒါဖီ ရဲ့ အမိန့် နဲ့လေကြောင်း ကနေ တိုက်ခိုက် ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရဲ့ ဒုတိယ အကြီး ဆုံးမြို့ ဘန်ဂါ ဇီ ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ က ထိန်းချုပ် ထား နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံ တွင်း မှ မငြိမ် မသက် မှု တွေ ကြောင့် လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရဲ့ ရေနံ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အကုန်ရပ် ဆိုင်း ထားရပါတယ်။တခြား အတည် ပြုမရ သေးတဲ့ သတင်းတွေ အရ လည်း အီရတ် ခေါင်းဆောင် ဆက်ဒမ် ဟူစိန် အတွက် ရှေ့ နေ လိုက်ပေးခဲ့သူ လစ်ဗျား ခေါင်း ဆောင် ရဲ့ သမီးတစ်ဦး ဖြစ်သူ အစ်ရှာ က အီတလီ နိုင်ငံ ကို ထွက်ပြေးသွားပြီ လို့သတင်းတွေ က ဆိုပါတယ်။ လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ခုနှစ် ရက်နေ့ မှာ အီတလီ နိုင်ငံ ဆာတ် မြို့ မှာ မွေးဖွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ် မှာ အာဏာ သိမ်း ပိုက် ခဲ့ပါတယ်။
Arab Revolution သတင်း အဖွဲ့ ၏ Freedom News Group ထံ သို့သတင်းပေးပို့ ချက် နှင့် အယ်ဂျာဇီးယား ဂြိုလ်တု ရုပ်သံ မှ ထုတ်လွှင့် ချက် များ နှင့် The Huffington Post အင်တာနက် သတင်းစာပါ အချက် များ ကို အခြေခံပြီး တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Copy from _ freedomnewsgroup.com
Posted by PNSjapan at 3:15 PM0comments
စီအဲန်အေ နှင့် နအဖ စစ်တပ်အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ နအဖတပ်သား တဦးသေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21 ရက် 2011 ခုနှစ်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် နှင့် နအဖ စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် နအဖ တပ်သားတဦး ကျဆုံးပြီး တဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝ မြို့နယ် ရှင်းလက်ဝ တပ်စခန်းမှ ခလရ ၅၅ နယ်လှည့် စစ်ကြောင်း နှင့် ချင်းအမျိုးသား တပ်မတော်၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်သားများ ရှင်းလက်ဝ တပ်စခန်းနားက ဆင်အိုးဝ ကျေးရွာတွင် ပစ်ခတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ချင်းအမျိူးသား တပ်မတော်မှ တပ်သား ၃ ဦးတို့သည် ပျောက်ကျားစစ် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ဆင်အိုးဝကျေးရွာ၌ ရောက်ရှိနေသည့် အချိန်တွင် တပ်အင်အား ၂၀ ခန့်ရှိသော စစ်ကြောင်းလှည့် နအဖ တပ်သားများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးပြီး ငါးမိနစ်ခန့်အကြာအပြန် အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်ဟု စီအဲန်အေ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by PNSjapan at 3:01 PM0comments
ဒေါ်စုကို ကနေဒါတက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်
21 ဖေဖော်ဝါရီ 2011,
ကနေဒါနိုင်ငံ အော်တ၀ါမြို့မှာရှိတဲ့ ကာလီတန် (Carleton) တက္ကသိုလ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ယုံကြည်ချက် တခုအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူ၊ တကယ့်ကို ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကာလီတန် တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိပတိ Dr. Roseann O’Reilly Runte က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ကနေဒါ စံတော်ချိန် နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှာ ကာလီတန် တက္ကသိုလ်ရဲ့ Kailash Mital ခန်းမမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ဖို့ တက္ကသိုလ် တခုလုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကာလီတန် တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိပတိ Dr. Roseann O.Reilly Runte က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ယုံကြည်ချက်အတွက်၊ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေတဲ့သူပါ။ စိတ်ထဲပေါ်လာမှ သတ္တိမွေးပြီး လုပ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာကို သေချာစဉ်းစား သုံးသပ်ပြီးမှ စိတ်ရှည် သည်းခံမှု အပြည့်နဲ့ သန္နိဋ္ဌာန် ခိုင်ခိုင် မာမာချပြီး လုပ်သင့်တာကို လုပ်နေသူပါ။ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟတွေနဲ့ နေရတဲ့အချိန် မရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ တယောက်တည်း အကျယ်ချုပ် ချခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀ရဲ့ အရာရာကို ပေးဆပ်ထားသူပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်RENGO(JTUC) တယ်လီဖုန်းဖြစ် ဆွေးနွေးခြင်း။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၁)ရက်။
ယနေ့ ဂျပန် စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂း၀၀နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး ဂျပန်အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် RENGO(JTUC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mr.Hiroyuki Nagumo တို့ က တယ်လီဖုန်းဖြစ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
RENGO အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာမှုအား ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် ကြိုဆိုပါကြောင်း သို့သော်လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂၁၀၀ ကျော် ဆက်လက် ဖမ်းဆီး ထားသဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်လာရန် နိုင်ငံတကာနှင့် လက်တွဲ၍ ဆက်လက် လှုပ်ရှားသွာမည်ဟု ပြောကြားသွားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်အစိုးရသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO)၏ နိုင်ငံတကာ စာချုပ်များဖြစ်သည့် အဓမ္မလုပ်အားပေး စေခိုင်းရာ ပြဋ္ဌန်းချက်( Convention 29)နှင့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့် ( Convention 87 ) များကို ဆက်လက် ချိုးဖေါက် နေသောကြောင့် ILO တွင် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်သဖြင့် ကျူးလွန်မှုများ ရှိပါက ပေးပို့စေလိုကြောင်း ပန်ကြားသည်။
ထိုမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အရေးတွင် အားလုံးသော အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်နိုင်ရေးသည် အရေးကြီးသည်။ ထိုမှသာလျှင် တည်ငြိမ်မှု ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် ပေါ်လစီအား ဂျပန်အစိုးရမှ ဆက်လက် ကြိုးပမ်း စေလိုကြောင်း၊
ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသော်လည်း ပြည်သူများ မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ ဆန္ဒ မပြည့်စုံသေးသဖြင့် ILO တွင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားစေလိုကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ချိုးဖေါက်မှုနှင် ပတ်သက်၍ စုဆောင်းပို့ဆောင်ပေးသွားမည် လက်တွဲ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ရေးရာဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms.Chihiro Ikusawa ၊ နိုင်ငံတကာ ရေးရာဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူး Mr.Masayuki Shiota ၊ မြန်မာရေးရာရုံး(ဂျပန်)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Dr.Min Nyo။
Posted by PNSjapan at 1:07 AM0comments
အမေရိကန် အစိုးရ အဆက်ဆက် ပြုတ်ကျစေချင်တဲ့ အာဏာရှင် ၆ ဦး
အီဂျစ်သမ္မတ မူဘာရခ်ကို လူထုအုံကြွ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာတလွှားရှိ ဆိုးသွမ်း အာဏာရှင်များမှာ သူ့တို့ အလှည့် ရောက်မှာကို ပူပန်ကြောင့်ကြ ရင်း အိပ်ရေးပျက်လျက် ရှိသည်။ အောက်တွင် အမေရိကန် အစိုးရ အဆက်ဆက် ပြုတ်ကျစေချင်တဲ့ အာဏာရှင် ၆ ဦးကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ကင် ဂျူံးအီလ်၊ မြောက်ကိုရီးယား
အထီးကျန် ရသေ့နိုင်ငံ မြောက်ကိုရီးယားကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဖိနှိပ် အုပ်ချူပ်နေသူဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင် ကင်အီလ်ဆွန်း က ၄၆ နှစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ အဖေနဲ့ သားပေါင်းလျှင် မြောက်ကိုရီးယား အာဏာကို သံမဏိလက်သီးဖြင့် ချုပ်ကိုင်ထားသည်မှာ ၆၃ နှစ် ရှိပြီ။ ကင် ဂျူံးအီလ်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းရေးဆွဲပြီး သမ္မတမှ အမြင့်ဆုံး စစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ရာထူး အမြဲကိုင်ထားနိုင်ဖို့ လုပ်ခဲ့သည်။
လူထုကို ပြည်ပ သတင်းများ နားထောင်ခွင့်မပြု။ နိုင်ငံခြား ဖုန်းအ၀င်များကို သတိထား စောင့်ကြပ်သည်။ အင်တာနက် ပိတ်ပင်ထားသည်။ စစ်အေးခေတ် ကွန်မြူနစ်ပုံစံအချိုးကို လုံးဝ မပြောင်း။ ကိုရီးယား ဗဟို သတင်း အေဂျင်စီမှ ၀ါဒဖြန့် မှုများ ပုံမှန် လွှင့်နေတုန်းပင်။ လုပ်အားပေး စခန်းများနဲ့ အတိုက်အခံ ပြုသူများအတွက် အကျဉ်းစခန်းများမှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ဖြစ်သည်။ အကျဉ်း စခန်းများတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၅၀,၀၀၀ ရှိမည်ဟု တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ခန့်မှန်းထား သည်။
ယခု ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့အတွက် အသက် ၂၇ ရှိ သူ့သား ကင်ဂျုံအန်း ကို သူ့အရိုက်အရာ ဆက်ခံဖို့ စီစဉ်နေသည်။
မွမ်မာ ကဒါဖီ၊ လစ်ဗျား
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၁ နှစ်တွင် ကပ္ပတိန်လေး မွမ်မာ အယ်လ် ကဒါဖီ က လစ်ဗျား စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ဘုရင် အိုင်ဒရစ် ထံမှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည်။ ယခု အသက် ၆၈ ရှစ်နှစ်ရှိ ကဒါဖီမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ရစ်ချဒ် နစ်ဆင် ပထမ သက်တမ်း ကတည်းက လစ်ဗျားအာဏာရယူထားသူ ဖြစ်ပြီး၊ နစ်ဆင်က သူ့ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့ ‘ခွေးရူး’ လို့ နာမည်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် ကဒါဖီ အာဏာရယူကတည်းက လစ်ဗျားကို အာရပ် အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ ဆိုရှစ်လစ်ဝါဒနဲ့ အစ္စလာမ် တို့ကို ရောသမမွှေပြီး မရေမရာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ အတိုက်အခံပြုသူများကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပြီး၊ လက်ရှိ အကျဉ်း ထောင်ထဲတွင် နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းထားသူ ၅၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ရေနံကြောင့် ကြွယ်ဝသော်လည်း အဂတိ လိုက်စားမှုများ ထူပြောလျက်ရှိသည်။
ရောဘတ် မူဂါဘီ၊ ဇင်ဘာဘွေ
အာဖရိက ခေါင်းဆောင်များအနက် ရောဘတ် မူဂါဘီ ကိုလည်း အနောက်နိုင်ငံများက သူတို့ ဟီးရိုးအဖြစ် အရင်က သတ်မှတ်ခဲ့ကြသေးသည်။ လူဖြူ ရိုဒီးရှား အုပ်စိုးမှုကို တော်လှန်ပြီး လူမည်း နိုင်ငံ ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားတဲ့အတွက် ဒုတိယ မင်ဒဲလား အဖြစ် မြှောက်ကြည့်ခဲ့သေးသည်။ သို့သော် အစကတည်းက မူဂါဘီ ရဲ့ စရိုက်က အကြမ်းဖက် အုပ်ချုပ်မှုကို လိုလားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မျိုးနွယ်စု လူ ၃၀,၀၀၀ ကို သတ်ဖြတ်ပြီး သားသတ်သမားဘွဲ့ ရသွားသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ မူဂါဘီ က အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်ကွပ်ရင်း သူရက်စက်ကြောင်း ပိုပြသခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံဖို့ အမျိုးမျိုး ကြံစည်သည်။ ကျူးကျော် ရပ်ကွက် အိမ်ယာ ၇၀၀,၀၀၀ ကို ဘူဒိုဇာတွေနဲ့ ထိုးကော်ပစ်သည်။ အာဖရိကရဲ့ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ ဘ၀ ရောက်ရှိသွားပြီး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အမြင့်ဆုံးနှင့် ၁၀ နှစ် ဆက်တိုက် ဂျီဒီပီ အနှုတ်လက္ခဏာ ပြနေခဲ့သည်။
သို့သော် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံ MDC ပါတီက အားကောင်းခဲ့ပြီး မူဂါဘီရဲ့ လူသတ် အုပ်ချုပ်မှုကို စိန်ခေါ်လာခဲ့သည်။ အခု အီဂျစ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲကို ဇင်ဘာဘွေ အတိုက်အခံများနဲ့ လူထုက အားကျလေ့လာနေပြီး၊ မူဂါဘီ နေရမယ့် ရက်ကို လက်ချိုးရေတွက်နေကြသည်။
ကက်စထရို ညီအစ်ကို၊ ကျူးဘား
၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် အာဏာရှင် ဘာတစ်စတာ အစိုးရကို တော်လှန်ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ဖီဒယ်လ် ကက်စထရို က နှစ် ၅၀ ကြာ ကျူးဘားကို ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ပြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ တွင် ကျန်းမာရေး မကောင်းတာကြောင့် သူ့ညီ ရာဟူး ကက်စထရို ကို တရားဝင် အာဏာ လွှဲပေးခဲ့ပေမဲ့၊ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး တစ်ပါတီ ကွန်မြူနစ်စနစ်အောက်တွင် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး၊ အရပ်သား လွတ်လပ်ခွင့် တွေကို ထိန်းချုပ် ထားတုန်းပင် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားထားတဲ့ ကျူးဘား အကျဉ်းထောင်များမှာ ကြွက်ပေါလွန်းတာကြောင့် အချို့ သတ်သေကြသည်။ ကျူးဘား ကျွန်းမှ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားသူများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်သည်။ မီဒီယာ၊ စာပေနဲ့ ပညာရပ်စာတမ်းများကို တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ရာဟူး ကက်စထရို လက်ထက် စီးပွားရေး တံခါး အသင့်အတင့် ဖွင့်လာပေမဲ့ အစိုးရ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုက ကြီနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ယခု အီဂျစ် ပြဿနာကြောင့် ကျူးဘား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
အလက်ဆန်ဒါး လူကာရှန်ကို၊ ဘီလာရပ်စ်
လူကာရှန်ကို ကို ဥရောပ နောက်ဆုံး အာဏာရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၁၆ နှစ်ကြာ သူ့အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် ဘီလာရပ်စ် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးမှာ အဖတ် ဆယ်မရအောင် ရှိနေသည်။
လူကာရှန်ကိုမှာ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ဘရက်ဇညက် ခေတ်မှ လက်ကျန်လူ ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ ရဲအဖွဲ့ကို ‘ကေဂျီဘီ’ လို့ အမည် ပေးထားကြသည်။ အာဏာရှင်စနစ် သင်ရိုး ပေါင်းစုံကို နောကြေထားသူပီပီ အတိုက်အခံကို အမျိုးမျိုး လှည့်စား နှိပ်ကွပ် သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရရှိတယ်ဆိုပြီး လူထုကို လိမ်ညာခဲ့သည်။ မဲပေးသူ ထောင်ပေါင်း များစွာက ပေါက်ကွဲပြီး လမ်းပေါ် ထွက်လာတော့ သူ့ လက်မရွံ့ ရဲများက ရာချီပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် များကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားသည်။
ဘီလာရပ်စ်မှာ ပိုလန်၊ လစ်သူနီးယား၊ လတ်ဗီးယား တို့နဲ့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံ အားလုံးမှာ ယခင် ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံများဖြစ်ခဲ့ကြပြီး၊ ယခု ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများ ဖြစ်နေကြပြီ။ ယခု အရှေ့ အလယ်ပိုင်း တော်လှန်ရေးများ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာမှုကြောင့် လူကာရှန်ကိုမှာ အအိပ် ပျက်ညတွေ များနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေဆိုသူမှာ နှလုံးသားမရှိသူ၊ မွေးရာပါ အဏာရှင် ဗီဇသဘာဝ ရှိသူဟု အမရိကန် အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည်။ အတိုက်အခံ ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပြန်ပေးဆွဲ ဆန်ဆန် ဖမ်းဆီးထားပြီး၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ အမြဲတောင်းဆိုနေသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သံဃာတော်များ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုကို ပစ်ခတ်နှိပ်နင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ် အရေးပေါ် ဖြစ်နေချိန်တွင် ပြင်ပမှ လူသားချင်းစာနာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို ငြင်းပယ်ပြီး၊ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို အတင်း လိမ်ညာ လုပ်ယူသွားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
နှစ် ၂၀ အတွင်း စီးပွာရေး တိုးတက်အောင် တစုံတရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိဘဲ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ၊ ကျောက်မျက် ရတနာများနှင့် အခြား သဘာဝ သံယံဇာတများကို ရောင်းချဖြုန်းတီးပစ်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူ့စစ်ဝတ်စုံတွင် ဆုတံဆိပ် ၂၀ နီးပါး ချိတ်ဆွဲထားတတ်သော်လည်း၊ မီဒီယာများရှေ့ စကားပြောဖို့ ကြောက်ရွံ့ပြီး၊ မဲပုံး လူထုရှေ့ ရိုးသားဖြောင့်မှန်စွာ ချပေးဖို့ သူရဲဘောကြောင်သူ ဖြစ်သည်။
Copy from _ oneshinwar.com
Posted by PNSjapan at 7:58 PM0comments
မတရား ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့်နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသည့် အခမ်းအနားကို တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါအရပ်ရှိ စစ်အခွန်ရုံး(မြန်မာသံရုံး)ရှေ့၌ ကျင်းပ ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ နီးပါး ရှိနေခြင်းဟာ၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ ကျွန်ဘဝမှ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘဲ၊ လွတ်လပ်ရေး ဆိတ်သုဉ်းနေကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြလျှက်ရှိနေပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပထမ အဆင့် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား(၂၀၀၀)ကျော်အား ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ် ပေးရန်အတွက် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတိ်ု့မှ ပူးပေါင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ မတရား အဖမ်းဆီးခံ ကြရသည့် လစဉ် ၂၁ ရက်နေ့ ကျရောက်တိုင်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေရန် အတွက် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတိ်ု့မှ ဆက်လက်ပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်ဆောင် သွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ကြပြီ အင်အား ၁၀၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 7:42 PM0comments
အလုပ်သမား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အမှတ်စဉ်(၁၂) ကို ဂျပန်-တိုကျိုမြို့ ရှိ Takadanobaba -Totsuka Chiki Center တွင် Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan) (FWUBC)မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချူပ် (ဂျပန်ပြည်) မှ ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ဦးစီး ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် မှတ်တမ်းပုံများ။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ ဦးသန်းဝင်း
တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၃) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၀)ရက်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်) Chin National Community –Japan မှ ဦးစီး၍(၆၃)နှစ် မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၂၀၁၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊တိုကျိုမြို့ နိရှိရှီနာဂါဝ အရပ်ရှိ ရှီနာဂါဝချူးရှော ခိဂယော စင်တာ ၃ထပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ဂျပန်သတင်း မီဒီယာများ၊ မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ဂျပန်လူမျိုးဧည့်သည်တော်များ၊ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တော်များ ၊တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဧည့်သည်တော်များ ၊ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ စုစုပေါင်း ဧည့်ပရိသတ် ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားကို ညနေ ၆နာရီတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်ပြီး ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်)၏ဥက္ကဌ ဒေါ်ကျင်လန်းလွန် မှ ချင်းအမျိုးသားနေ့ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်း ပြောကြား၍ အတွင်းရေးမှူး ကျင်ဟောက်လွန်းမှ (၆၃)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကြေငြာစာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဒုတိယပင်လုံခေါ် ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ပေါ်ပေါက်ရေးကို ထောက်ခံကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးရန်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး နည်းလမ်းဖြင့်နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုကြောင်း ၊ ပင်လုံစာချုပ်ပါ အနှစ်သာရများကို ပစ်ပယ်ထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အခြေခံသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအရ ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အစိုးရသစ်သည် ပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင်းသားများကို ကိုယ်စားပြုသော အစိုးရမဟုတ်ကြောင်း၊ပြည်ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိအမည်ခံ အစိုးရသည် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး နည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် တိုက်တွန်းကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဒုတိယပင်လုံ(ခေါ်)၂၁ရာစု ပင်လုံ သဘောတူညီမှု ပေါ်ထွန်းသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည့်အချက်များ ပါရှိပါသည်။ ထို့နောက် ဧည့်သည်တော် မစ္စတာဝါတာနဘေး ခေါ် ဆရာဦးရွှေဘနှင့် မစ္စတာ ခုမခိရိ တခု တို့မှ ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်)မှ ဂုဏ်ပြုလွှာသည့် အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တေးဂီတ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ချင်းရိုးရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ပြသခြင်း အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော ပရိသတ်များနှင့်အတူ ချင်းရိုးရာ စုပေါင်းအကဖြင့် ညကိုးနာရီတွင် အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ ။Salai Kyaw Thein Aung
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ဆရာ ဦးခင်မောင်ကြည် (အဝေးရောက် သံတမန်တဦး) တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၀)ရက်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ)၏ နာယက တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ကြည် (အဝေးရောက် သံတမန်တဦး) နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ Minami Otsuka,Hall Dai IChi ခမ်းမတွင် ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၃၀ နာရီ မှ စတင်၍ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ Lian Kham Sum
နာဂိုယာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မွန်တိုင်းရင်းသားများတို့မှ စုပေါင်း၍ (၆၄)နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို နာဂိုယာမြို့ MOTOYAMA CO-PO 4F,ခမ်းမ၌ ယနေ့ အပိုင်း ၂ ပိုင်းခွဲကာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့် မရတော့တဲ့ အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ယခုလို ပြည်တနေရာတွင် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆို ဆွေနွေးမှုများ၊ မိမိတို့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပကတိအတိုင်း ထုတ်ဖော် ပြသနိုင်မှုများဖြင့် ကျင်းပ နိုင်ခြင်းကြောင့် လူများစွာ မလာရောက်နိုင်လင့်ကစား အမျိုးသားရေး လက္ခဏာအမှန်များကို တွေ့မြင် သိရှိခံစားရသည့်အတွက် နိုင်ငံရေး အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသည်ဟု ပလောင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ် ကိုမိုင်ကျော်ဦးက ပြောပြသွားသည်။
သမိုင်း အစစ်အမှန်ကို ခေတ်ကာလ အလိုက် အပိုင်းအခြားဖြင့် မွန်တို့၏ ဖြစ်တည်မှု အကြောင်းနှင့် မွန်အမျိုးသားများ ဆင်းသက်လာပုံ၊ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကိုမင်းဝင်းတေဇ မှလည်ကောင်း၊ မွန်ဘာသာ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တို့တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်များကို powerpoint ဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျိုးသားနေ့များ ထုံးစံအတိုင်း ရိုးရာ အစားအသောက်များကို ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခဲ့ပြီး မွန်အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ကို တက်ကြွစေသော မွန်အမျိုးသား သီချင်းများကို ဖျော်ဖြေမှုများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by PNSjapan at 10:49 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်(ဂျပန်)၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းစည်းဝေး
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ စုပေါင်းပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ကွန်ယက်(ဂျပန်)NDB-Japan၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို Takadanobaba အရပ်ရှိ Recycle Center 4F,မှာ ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၀)ရက် နံနက် ၉း၃၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် သတင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။ Lian Kham Sum
Posted by PNSjapan at 10:48 PM0comments
ကော့ကရိတ်အနီး တရုတ်ဖြူတောင် ဝါးစခန်းအား ဒီကေဘီအေ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ နေ့က စတင်ပြီး မြဝတီ ကော့ကရိတ် ကားလမ်းကို ဒီကေဘီအေ ဘက်က ပြည်သူလူထု ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှု မရှိရလေအောင် သွားလာခွင့်တွေ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက် မြဝတီ ကော့ကရိတ် ကားလမ်းပေါ်မှာ နေ့စဉ် ရက်ဆက်လို လို တိုက်ပွဲ ထိတွေမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကော့ကရိတ်မြို့ အနီး မြဝတီ ကော့ကရိတ် ကားလမ်းပေါ်က ဝါးစခန်း တရုတ်ဖြူတောင်မှာရှိတဲ့ နအဖ လမ်း ကင်းတပ်တွေကို ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်ဂျပန် ဦးစီးတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁၂ ခန့်က ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲက နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ကဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာကိုတော့ အသေးစိတ် မသိရှိရသေးပါဘူး။ မြဝတီမြို့က မြို့ခံ မျက်မြင် တွေ့ရှိသူတွေ ပြောပြတာကတော့ ဒီနေ့ နေ့လည်လောက်က ကော့ကရိတ် ဘက်ကနေ နအဖ တပ်က ဒဏ်ရာရ လူနာတွေကို မြဝတီဆေးရုံးကို သယ်လာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပြပါ တယ်။ ဘယ်နေရာမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာလဲ သေချာ မသိဘူးလို့လည်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ကဆိုရင် ကချောဝါးလေး တောင်ကုန်းနားက သုံးထပ်ကွေ့ နေရာမှာ ဒီကေဘီအေ ဘက်က မိုင်း စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ အတွက် နအဖ တပ်မ (၂၂) လက်အောက်ခံ ခမရ (၃၅၇) တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀ ကျော် ထိခိုက် သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအထဲမှာ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦး၊ အရာခံဗိုလ် ၁ ဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦး၊ ဒုတပ်ကြပ် ၁ ဦးနှင့် တပ်သား ၆ ဦး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၀ ဦး သေဆုံးကာ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ DKBA တပ်မဟာ (၅) နှင့် ပြန်လာပူးပေါင်းသည့် DKBA တပ်မဟာ (၉၉၉) မှ တပ်ရင်း (၅) မှူးဖြစ်သူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောဖိုးခလိက ပြောပြတယ်လို့ ကေအိုင်စီ သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အလားတူ ဒီလ ၁၃ရက်နေ့ကလည်း ကော့ကရိတ်မြို့က တပ်မတော် စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အရာရှိချုပ်ရုံး (စရခ) ရုံးကို DKBA တပ်ဖွဲ့က လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ သွားရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖ ၄ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လိုလဲ ကေအိုင်စီ သတင်းများ အရ သိရှိရပါတယ်။
Copy from _ naytthit.net
မေ့မရသေါ မမေ့သင့်သော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တယောက်အကြောင်း
ကရင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ကေအဲန်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေမှူးဟောင်း ပဒိုမန်းရှားလာဖန်း ဆုံး သွားတာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် ၊၂၀၁၁ ခုနှစ်ဆိုရင် (၃)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီး။ ပြည်တွင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ အပါအ၀င် ကမ္ဘာအ ရပ်ရပ်မှာ ရောက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ အတီးပဒိုမန်းရှားလာဖေါင်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့၊လေးစားတဲ့ ကရင်လူထုတွေက သူ့ အတွက် အမှတ်တရပ် ဆုတောင်းပွဲတွေ၊ အလှူဒါနပွဲတွေ ပြုလုပ်ကျင်းပ ကြပါတယ်။
သေသေါသူ ကြာရင်မေ့ ဆိုတဲ့စကားပုံ ရှိခဲ့ပေမဲ့ မျိုးချစ်တော်လှန်သူ များအတွက်၊ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ် နိုးသူ များအတွက် အတီးပဒိုမန်းရှာလို ခေါင်းဆောင် တယောက်ကိုတော့ မမေ့နိုင်ရုံမက သူ့ရဲ့အတွေး အခေါ်ခံယူချက် တွေဟာ ဒို့တတွေရဲ ရင်ထဲမှာ ဆက်လက် ကိန်းအောင်း ရှင်သန်နေမှာပါ။ အတီးမန်းရှာကို ကျနော်တို့ မမေ့သင့် မမေ့အပ်တဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 11:41 PM0comments
နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ဦး DKBA ရှေ့ထွက်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ကျဆုံး
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ ကျောက်ခက်နှင့် ဘလယ့်ဒို့ အကြားတွင် လှုပ်ရှားနေသော နအဖ စကခ(၁၂)လက်အောက်ခံ (၂၃၁) တပ်ရင်းကို DKBA က ယနေ့မနက် ၈နာရီအချိန်၌ ရှေ့ထွက်မိုင်းဖြင့် ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖဘက်က ၃ဦး သေဆုံးပြီး ၄ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကို ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်(ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး) ဦးဆောင်သည့် DKBA တပ်မဟာ(၅)၊ (၉၀၇) တပ်ရင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုလို ရှေ့ထွက်မိုင်း တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် နအဖဘက်က အထိ နာစေသေည်ဟု DKBA တပ်မှူးတဦးက ကေအိုင်စီ ကို ပြောသည်။
“ဖူးခါ့ဆူ့(ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး)ကတော့ သူ့လူတွေကို လွှတ်ပြီး ဒီမှာလာလှုပ်ရှားတဲ့ နအဖ တပ်မှန်သမျှ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက် ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီးသားပဲလေ။ ဒါကြောင့် နအဖက ဒီနေရာမှာ ရှိနေသရွေ့တော့ DKBA ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို နေ့တိုင်းလိုလို ဆက်ခံရအုံးမှာပဲ။ အထူးသဖြင့် သူတို့ကို ဒီလိုရှေ့ထွက်မိုင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ပိုအထိ နာတယ်လေ။”ဟု သူက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့၌လည်း ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ခက်နှင့် ဖလူးလေးအကြား ပဒူအုံ (ပလော တပို့)တွင် DKBA တပ်မဟာ(၅) တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ ဆွဲမိုင်းကြောင့် နအဖ တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံ ခမရ(၃၅၇) တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦး သေဆုံးပြီး ၁၃ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
သတင်းရင်းမြစ် _ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
နိုင်ငံတကာ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များဖြင့် အမေရိကန် ဝန်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့က ဝါရှင်တန် ဒီစီ မြို့တော် နိုင်ငံခြားရေးဌာနတွင် မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံ ၂၀ ကျော်မှ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: Courtesy of US State Department)
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်က လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ဖို့ နှစ်နှစ်ကြာ အချိန်ယူ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ မစ္စက် ကလင်တန်က အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်း ပြောကြားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားဖို့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေတယ် ဆိုတာကို ဒီလိုမျိုး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကတဆင့် ပြသနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် က ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အနေနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဖို့ အဆင်မြင့် သံတမန်တွေ အများကြီး ခန့်အပ်ထား ပါတယ်လို့ ဟီလာရီ ကလင်တန်က ပြောသွားပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေကို အမေရိကန်အစိုးရက အထောက်အပံ့ ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ် ပြုခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ US Campaign for Burma အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဒင်က ပြောပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 1:22 AM0comments
အဖမ်းဆီးခံ ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦး ပြန်လွှတ်ရန် တိုကျိုတွင် ဆန္ဒပြ
၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၈)ရက်။
ရခိုင်၊ ကရင် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်(၃၄)ဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်)နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ကရင်လူမျိုးများတို့မှ ဦးစီး၍ တိုကျို Shibuya, UN ရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
စစ်အစိုးရ၏ ခိုင်းစေချက်ဖြင့် အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတဦး၏ လှည့်ဖြား အပြောကို ယုံကြည်ခဲ့သည့် ရခိုင်အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ NUPA နှင့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ရခိုင်နှင့် ကရင်တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦးကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယစစ်တပ်က အိန္ဒိယရေပိုင်နက် အန်ဒမန်-နီကိုးဘားကျွန်းစု လန်းဖောကျွန်း၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၃ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်နှင့် ကရင်တော်လှန်ရေး ရဲဘော် ၃၄ ဦးအပေါ် စွဲချက် တင်ထားသည့် အမှုများအားလုံးမှာလည်း၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ နေ့ မှာ ကတည်းက ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အခုထိ ကိုးလ်ကတ္တား အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခံနေကြရဆဲဖြစ်ကြောင်း တော်လှန်ရေးသမား ၃၄ ဦးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်နှင့် တာဝန်အရှိဆုံး အိန္ဒိယ အစိုးရအနေဖြစ် အိန္ဒိယတွင် နေထိုင်ခွင့်ပေးရန်နှင့် UNHCR အနေဖြင့် တရားဝင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးရန် စသည့် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသည့် စာကို တိုကျိုမြို့ရှိ UN ရုံးတာဝန်ခံ မှတဆင့် UNHCR တာဝန်ရှိသူများထံတို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
တောင်းဆို ဆန္ဒပြသည့် အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှစုစုပေါင်း (၁၀၀)ခန့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပထမဆုံး လီဆူရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မြစ်ကြီးနားတွင် ကျင်းပ
ပထမဆုံး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ လီဆူတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတွင်ကျင်းပ။ ဓါတ်ပုံ-ကချင်သတင်းဌါန
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17 ရက် 2011 ခုနှစ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လီဆူ တိုင်းရင်းသားများ၏ နှစ်သစ်ကူး ရိုးရာ ပွဲတော်အား ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကျင်းပနေသည်။
ပွဲတော်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်မှ ၄ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတ၀န်းရှိ လီဆူများနှင့် ရပ်ဝေးမှ ထိုင်း လီဆူမျိုးနွယ်၊ တရုတ်ပြည်မှ လီဆူ မျိုးနွယ်စသဖြင့် လာရောက် ပါဝင် ဆင်နွဲနေကြသည်။
ယခုလို နှစ်သစ်ကူး ရိုးရာပွဲအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပရခြင်းမှာ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇေယျအောင်နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဦးသိန်းဇော်တို့မှ ကျင်းပခွင့်ပေးတာ ဖြစ်ကြောင်း ပွဲတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးပြောသည်။
“လီဆူရိုးရာ ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်၊ ရိုးရာဝတ်စုံများကို သိဖို့ရန်နှင့် ခုဆို နိုင်ငံခြား ဝတ်စုံတွေကိုသာ အတုယူ ဝတ်ဆင်နေတာကြောင့် ကိုယ့်ရိုးရာကို မသိလာကြဘူး၊ ဒါကြောင့် ခုလိုကျင်းပတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပွဲတာဝန်ရှိသူမှပင် ပြောသည်။
ပွဲတက်ရောက်သူ ဦးရေမှာ ၂ သောင်းကျော်ရှိပါတယ်လို့ ဧည့်စာရင်းမှ သိရသည်။
“တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ လီဆူရိုးရာ ဝတ်စုံတော်တော်များများကို တွေ့ရတယ်၊ ပျော်လည်း ပျော်တယ်၊ လီဆူ ဆိုတဲ့ လူတော်တော်များကိုလည်း တွေ့ရတယ်၊ ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူးလို့” ပွဲတက်ရောက်သူ လီဆူ တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
စစ်အစိုးရ ဖိအားများကို စုပေါင်း ကာကွယ်ရန်အတွက် အပစ်ရပ်နှင့် အပစ်မရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ပါဝင်သည့် “ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ” ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်။
ယခုလ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တောတွင်း တနေရာ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၅၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သော ညီလာခံကြီးတွင် စစ်အစိုးရက စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖိအား ပေးလာလျှင် စုပေါင်း၍ ခုခံ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် United Nationalities Federal Council (Union of Burma) အမည်ရ ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“စစ်အုပ်စုကနေ လွှတ်တော်တွေဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းရင်းသားတွေကို ချေမှုန်းဖို့၊ အင်အားဆုတ်ယုတ်အောင် လုပ်တာ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ပြည်သူ့စစ်တပ် လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးရင် တဖွဲ့ထဲ ခုခံနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်ရေးအရ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါင်းပြီးတော့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ခုခံပြောဆို ကာကွယ်မှ ရပ်တည်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ မဖြစ်မနေ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ” ဟု ထိုကောင်စီ၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ PNLO မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကောင်စီကို ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ်သမဂ္ဂ္ဂ LDU၊ ညီညွတ်သော ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ NUPA၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP၊ ကချင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNO၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP၊ ဝ' အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် WNO၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PNLO နှင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ALD စသည့် အပစ်ရပ်နှင့် အပစ်မရပ်သေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပြင် ပြည်ပအခြေစိုက် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) UNLD (L/A) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်း ၁၂ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၇ ဦး စေလွှတ်ကာ ကောင်စီဝင်များအဖြစ် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကာ၊ ကျန်ရှိသေးသော အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်လာနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KNU ၏ လက်နက်ကိုင်တပ် KNLA ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပဒိုဆဲဖူး၊ KIO မှ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂေါင်ရီဇော်ဆိုင်းက ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ၊ KNPP ဝါရင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ခူးအေဘေတွိ့သ်က ဒုဥက္ကဋ္ဌ ၂ ၊ NMSP မှ နိုင်ဟန်သာက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ PNLO ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးခံရသည်။
Posted by PNSjapan at 12:08 AM0comments
အခုထွက်ရှိတဲ့ ဒေါနမြေမှ ဟစ်ကြွေးသံ (သို့) ဖလူးတိုက်ပွဲခွေဟာ
အခု တင်ပေးတဲ့ ဖလူးတိုက်ပွဲရုပ်သံက (၁၆)မိနစ်စာသာရှိတဲ့
ဒီတိုက်ပွဲခွေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကြော်ငြာထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်း
မတရားမှုကို တွန်းလှန်တဲ့ ဝေါ်လေ၊ဖလူးတိုက်ပွဲမှာ
ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ ကရင့်အမျိုးသားသူရဲကောင်းများနဲ့
You Tube _ sawdahbo
Posted by ;sawdahbo2749@gmail,com
Copy from _ ninedeblood.
ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တွင် လျှပ်တပျက် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု ကို ဦးစားပေးကျင့်
မဲဆောက်၊ ၊အာရှဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံ များ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုကို ယခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံဉ် စတင်ပြုလုပ်နေ ရာ ယခုနှစ် တွင် လျှပ်တပျက် ၀င် ရောက် စီးနင်းသည့် တပ် Raid Force ကို အထူးဦးစားပေးပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ကြောင့် အမေရိကန် ကမ်းတက်တပ်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Cobra Gold စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံမှ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ စစ်သား များ နှင့် ခောတ်မှီစစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ သုံးကာ စစ်ရေးလေ့ကျင့် ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ တတိယနေ့ မြောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ဉ် အမေရိကန် စစ်လေယာဉ် နှစ်စီးမှာ နယ်စပ် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ မြ၀တီ မြို့ အနီးမှ ကပ်၍ ပျံသန်း သွားရာ မြို့ ခံ များ က အော်ဟစ် အားပေးကြသည် ဟု Freedom News Group မှ သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု သည် အာရှ ဒေသအတွင်း တည်ငြိမ်မှု အတွက် ဖြစ်သည်။ထိုင်း နိုင်ငံသည် ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု များ ကိုလက်ခံ လာရာ နှစ် ပေါင်း ၃၀ ရှိသွားပြီ ဖြသ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် ယမန် နှစ် ကမှ ရွှေမြွေဟောက် စစ်ဆင်ရေး တွင် ပူးပေါင်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Marines, Sailors Showcase New School during Cobra Gold 2011 (waronterrornews.typepad.com)
US, Thai Marines join for Cobra Gold 2011 (waronterrornews.typepad.com)
Copy from _ freedomnewsgroup.com/
ဒေါ်စု လုံခြုံရေးနဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေ အမေရိကန် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်
15 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကင်တာကီ ပြည်နယ်က ၀ါရင့် ရီပတ်ဘလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ခေါင်းဆောင် မစ်ခ်ျ မက်ကောနဲလ် (Mitch McConnell) တို့ မနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ အပြည့်ရှိနေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တဦးပါလို့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ်ခ်ျ မက်ကောနဲလ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုမှုထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့အပေါ် သူ့အနေနဲ့ အထူးပဲ စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း၊ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာက ၀ိုင်းပြီး ရှုတ်ချသင့်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေတွေကို သူဆက်ပြီး အနီးကပ် စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တုန်းကလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံ အားပေးသွားမယ့်အကြောင်း ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ကတိပေး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ် - ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)
Posted by PNSjapan at 1:33 AM0comments
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကို ဂျပန်နိုင်ငံ-တိုကျိုမြို့ တွင်ကျင်းပသော အခမ်းအနားရုပ်သံ။
youtube Video_ maungwto
အီဂျစ်တပ်မတော်ကို နမူနာယူသင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ရာ အီဂျစ်ပြည် ကိုင်ရိုမြို့လယ်ရှိ တဟီရာ ရင်ပြင်အနီး၌ အီဂျစ်တပ်သား တဦးက ကလေးငယ်တဦးကို ပွေ့ချီထားစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
14 February 2011 ,
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော အာဏာရှင် သမ္မတ ဟော်စနီ မူဘာရက် နုတ်ထွက်သွားသည့် ဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော် သည်လည်း အီဂျစ် တပ်မတော်ကို နမူနာ ယူသင့်ကြောင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရုံးချုပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ၆၄ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားအပြီး ပြည်တွင်း ဂျာနယ် သတင်းထောက် တဦး၏ မေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ အာဏာရှင် သမ္မတ မူဘာရက် ရာထူးမှ ဆင်းပေးရန် အီဂျစ်လူငယ်များက ဇန်န၀ါရီ လကုန်ပိုင်းမှ စတင်၍ ဆန္ဒပြပွဲများ စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ၂ ပတ်နီးပါးအကြာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ မူဘာရက် ရာထူးမှ ဆင်းပေး ခဲ့ရပြီး ၁၃ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်က လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းကာ ၆ လအကြာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု ကြေညာ ခဲ့သည်။
“လူတွေ သောင်းသိန်းချီ ဆန္ဒပြကြပေမယ့် အီဂျစ်တပ်မတော်က သူ့ပြည်သူတွေကို မပစ်ဘူး။ သူ့ ပြည်သူတွေ ဘက်က ရပ်တည်တယ်။ ဒါကို မြန်မာ့ တပ်မတော်က စံနမူနာ ယူသင့်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
Posted by PNSjapan at 1:44 AM0comments
တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မိန့်ခွန်း
You Tube _ zayyar20283
Copy from _ burmacampaignjapan.org
Posted by PNSjapan at 12:39 AM0comments
HIV/AIDS လူနာတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ဘာအခက်ခဲတွေ ရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ အမေးခံရ ပါတယ်။ ကျမလည်း ဖြေစရာစကား မရှိသလိုတောင် ဖြစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ အကုန်လုံး လိုအပ်တယ်လို့ ပြောရင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြလေမလား မသိဘူး။
“ဆယ့်ရှစ်အိမ်” လို့ ကျမတို့ အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း အမှတ် ၁၈ ရပ်ကွက်က ဂေဟာမှာ လူနာ တချို့က ကျမတို့ကို ပြန်ကူညီနေကြပါတယ်။
တခါတော့ သူတို့က ကျမကို ထူးဆန်းတဲ့ မေးခွန်းတခု မေးပါတယ်။ “လူနာတွေကို မီဒီယာသမားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ပိုက်ဆံရှိတယ်၊ တည်းစရာနေရာ ရှိတယ်လို့ မပြောဖို့ ခြိမ်းခြောက်ထားသလား” တဲ့။ ဒီလို လုပ်စရာ မလိုပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ မေးတာလဲ ဆိုတော့ “လာသမျှ လူနာတွေက ဘာမှမပါဘူး၊ ဘယ်မှမသွားတတ်ဘူး၊ ဘယ်မှာမှ နေစရာမရှိဘူး၊ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး၊ ဘာ စားစရာမှမပါဘူး ဆိုတာချည်း ပြောပြောနေလို့ပါ” တဲ့။ ဒါဟာ ရင်းနှီးခင်မင်လာတဲ့ သူတို့က မွန်းကျပ်စရာ အခြေအနေနဲ့ ကြုံချိန်မှာ နောက်ပြောင်ပြောတာဖြစ်လို့ ကျမ သက်ပြင်းချရင်း ရယ်မောမိပါတယ်။
တကယ် လက်တွေ့မှာတော့ အခြေအနေတွေက ရယ်မောစရာ နည်းပါးပြီး ရင်မောစရာတွေပဲ များပါတယ်။ ကျမက ပင်ကိုအားဖြင့်တော့ အဆင်ပြေတာ၊ မပြေတာကို ပြောလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး များလှတဲ့ လူနာတွေကို စောင့်ရှောက်ရင်းမှ ကျမလည်း ညည်းတတ်တဲ့ အကျင့် ပါလာသလား မသိပါဘူး။ မညည်းမိအောင် ထိန်းသိမ်းနေရင်းကကို ညည်းညူမိနေတာပါ။
ကျမတို့ကို ထောက်ပံ့သူတွေကလည်း နိုင်သလောက်၊ စွမ်းသလောက် လှူနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် မလောက်ငှဘူး ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းတောင် ထပ်တိုး ပြောရမလိုပါပဲ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လောက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသလဲ၊ အကူအညီ အကာအကွယ် မဲ့နေသူ ဘယ်လောက် များသလဲ ဆိုတာ အနည်းအကျဉ်းတော့ ပေါ်လွင် ထင်ရှားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ကူညီနိုင်တဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးမှာတောင် ဒီလောက် ခက်ခဲမှု၊ ကျပ်တည်းမှု ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆို ဘယ်လောက်တောင်များ ခက်ခဲနေသလဲ၊ ဘယ်လောက်များ လူတွေ သေနေသလဲဆိုတာ တွေးမိပြီး ကျမ စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြစ်ရပါတယ်။
တနေ့တနေ့ ဒီ ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေး ဆေးရုံတွေမှာ လူဘယ်လောက် သေနေလဲဆိုတာ ကျမ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒီဆေးရုံတွကို ကျမအပြစ် မမြင်၊ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒီဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ ၀န်ထမ်း အင်အားကလည်း မလုံလောက်၊ နောက် ဆေးဆိုရင်လည်း ပဋိဇီဝဆေးလောက်သာ ပေးနိုင်ပြီး တခြားဆေးဝါးတွေက မရှိသလောက် ဆိုတော့ လူနာတွေက ဆေးရုံဆို တယ် မသွားချင်ကြလှပါဘူး။
လူတွေမှာ “အားကိုးမရဘူး” ဆိုတဲ့ အသိ ၀င်နေတာက အတော်လေး ခက်ပါတယ်။ မဖြစ်လွန်းမှ ဆေးရုံတင်ကြ၊ ဆေးရုံရောက်ချိန်မှာလည်း ခြေလွန်လက်လွန် ဖြစ်နေကြ၊ နောက် ဆေးဖိုးဝါးခကလည်း မတတ်နိုင် ဆိုတာနဲ့ လုံးချာလည်၊ အသက် ဆုံးရှုံးနေသူ အများကြီးပါပဲ။ တကယ်တော့ တာဝန်ရှိသူ ဘယ်သူလဲ မေးရင်တော့ ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ် တာဝန်ရှိသူ အစိုးရကမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် သူတို့လက်အောက်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူတွေကတော့ ပြောစရာ မရှိလောက်အောင်ပါပဲ။ သူတို့မှာ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ စိတ်စေတနာ ရှိတယ် ဆိုဆို ဘာမှ လုပ်မရပါဘူး။
ဒါတွေဟာ အရေးပေါ်ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စတွေပါ။ ကျမတို့ လူမျိုးတွေဟာ မဖြစ်ခင်ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဖြစ်ပြီးရင်တော့ ပြာပြာသလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တည့်တည့်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဟာမျိုးကို ရှောင်ပါတယ်။
ဒီလို အကူအကယ် မဲ့နေတာကိုလည်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူ၊ အောက်ခြေဆေးရုံအုပ် အစရှိသဖြင့် မတင်ပြရဲပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ပြောရင် အလုပ်ပြုတ်မယ် ဆိုတာကို တွေးပြီး မပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ပဲခူးမှာ လူငယ်နှစ်ယောက်ကို ကလေးစစ်သားက သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာ ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေ မရိပ်မိတာကတော့ သေနတ်သံ မထွက်ဘဲ သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စစ်အစိုးရက လူတွေ သေကြေနေတာကို လျစ်လျူရှုနေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ဒီအကျိုးဆက်ဟာ နောင် လေးငါးခြောက်နှစ်လောက် အထိ ကုစားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလတွေမှာလည်း တခြားနိုင်ငံရေး အာဏာလုပွဲတွေပဲ လုပ်နေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ လူတွေ ဒီထက်မက သေကြဦးမှာပါ။ ဒီတော့ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရကတော့ ဘာတာဝန်မှ မယူပါဘူး။ ကျမတို့ နိုင်သလောက် တာဝန်ယူကြရမှာပါ။
ကျမ အင်တာဗျူးတခုမှာ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားက လောကြီးပြီး ပြောလိုက်မိတာပါ၊။“တရားမ၀င်ငွေလည်း ယူမယ်” ဆိုတာပါ။ အမှန် ကျမ ဆိုလိုရင်းက အစိုးရက အသိမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်အဖွဲ့စည်း ဘယ်နိုင်ငံက ငွေကြေးမဆို ကျမ လက်ခံပြီး လူနာတွေအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ကျမကို လာတွေ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ၊ ပြီးတော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက မြန်မာပြည်သားတွေလည်း ပြောကြပါတယ်။ ကျမ လုပ်ရပ်အတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့။ ကျမလည်း ဒီလို အပြောခံရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂုဏ်ယူနေကြရုံနဲ့ ပြီးမတဲ့လား။ ဒီ အကာကွယ်မဲ့ လူသားတွေကိုရော ဘယ်လို ကူညီကြမလဲ ဆိုတာလေး စဉ်းစားပေးကြပါ။
ဒါကြောင့် ဂုဏ်ယူကြတယ်၊ ဒီထက်မက ဂုဏ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတာဟာ အကောင်းဆုံးပါလို့ ကျမ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Copy from _ irrawaddy
Posted by PNSjapan at 5:42 PM0comments
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဒုတိယပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ် သတင်းဓါတ်ပုံ
သတင်းဓါတ်ပုံ ။ Lian Kham Sum
Posted by PNSjapan at 7:02 PM0comments
တိုကျိုတွင် ကျင်ပြုလုပ်သည့် (၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၃)ရက်။
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ Minami Otsuka,Hall တွင် ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီ မှ စတင်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်) AUN-Japan မှ ဦးစီး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် အပိုင်း ၂ပိုင်းခွဲကာ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ပထမပိုင်းအစီအစဉ်တွင် ပင်လုံစိတ်ဓါတ် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံပေါ်ပေါက်ရေး စသည့် အကြောင်းအရာတို့ကို တက်ရောက် လာကြသည့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ)၏ နာယက တဦးဖြစ်သူ အထူး ဧည်သည်တော် ဦးခင်မောင်ကြည်(အဝေးရောက် သံတမန်တဦး)နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်များ ၊ ဧည့်သည်တော်များတို့မှ နိုင်ငံရေး အနှစ်သာရရှိရှိ အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးကို ထောက်ခံ အားပေးနေသော ဂျပန်အမတ် သမဂ္ဂ(GIREN)၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ အထက်လွတ်တော် အမတ် (ဂျပန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) Mr.Azuma KONNO မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ ပြည်ထောင်စနစ် ဆိုတာလည်း မရသေးသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေး များလဲ ဆုံရှုံး နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ အသိုင်း အ ၀ိုင်း များနှင့်အတူ လက်တွဲပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းသည့် သ၀ဏ်လွှာ တစောင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ (၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ပေးပို့သည့် ရုပ်သံ အမှာစကားထဲမှ ကောက်နုတ်ချက် တချို့
" ကျမတို့အားလုံး ဒုတိယပင်လုံ(ခ) ၂၁ ရာစုပင်လုံကို ဦးတည်တယ်ဆိုတာဟာ အခုခေတ်အခါနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ကို ခိုင်မာအောင်လို့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ဘယ်သူကမှ အထင်မလွဲစေချင်ဘူး ကျမတို့ကို တခါတလေ ကျလို့ရှိရင် တချုိ့အဖွဲ့အစည်းတွေ တချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒုတိယပင်လုံ(ခ) ၂၁ ရာစုပင်လုံကို ဦးတည်တယ် ဆိုတာဟာတမင် ပြဿနာရှာတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေ လည်းရှိတယ် ဒါ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ထင်တဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ် ကျမတို့ဟာ ပြဿနာရှာတာ မဟုတ်ဘူး ကျမတို့ ညီညွတ်မှုကို ရှာတာပါ ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုအတွင်း ညီညွတ်မှုကို ရှာတာပါ ဘာအန္တရာယ်မှလည်း မရှိပါဘူး မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အန္တရာယ်မရှိတဲ့အပြင် ကျမတို့အတွက် အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေ ပေါ်နိုင်စရာရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို သတ္တိရှိရှိ စိတ်ထားမှန်မှန် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ကြီး မပျိုမလဲနိုင်တဲ့အထိ ခိုင်မာအောင်လို့ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပြောကြားသွားပါတယ် "
ဒုတိယပိုင်း အခမ်းအနား အစီအစဉ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အက ပဒေသာများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက် သွားခဲ့ကြပါသည်။ (၆၄) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဒုတိယပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေရေး သတင်းဓါတ်ပုံ အစီအစဉ်များတိ့ကို ဆက်လက် ဖေါ်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by PNSjapan at 5:12 PM0comments